ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း (P&W) မှာ ပါဝင်တဲ့ ဂီတာသမားရဲ့ အရေးကြီးပုံ | ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း (P&W) မှာ ပါဝင်တဲ့ ဂီတာသမားရဲ့ အရေးကြီးပုံ – FGA Tulsa
Media Zomi Service
Connect FGA Myanmar
ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း (P&W) မှာ ပါဝင်တဲ့ ဂီတာသမားရဲ့ အရေးကြီးပုံ Admin / May 29, 2015 / FGA File ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း (P&W) မှာ ပါဝင်တဲ့ ဂီတာသမားရဲ့ အရေးကြီးပုံ
တူရိယာ ၄၊၅ ခု တီးတဲ့ တီးဝိုင်း (Full Band) မှာ Electric ဂီတာ သမားမှာ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးအကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ရှင်းပြပါရစေ။
ဂီတာသမားကြောင့် တီးဝိုင်းအတွင်းမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ရတတ်သလို ဂီတာသမားကြောင့် ရသင့်တဲ့ ရလဒ်တွေ မရတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ ရှေးရိုးစွဲနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တခုကတော့ ဂီတာသမားဟာ တီးဝိုင်းတခုမှာ ဆရာအကျဆုံး ပုံစံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ဂီတာသမားရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကနေ အများစုက လိုက်ကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဂီတာကို Foundation အဖြစ်ထားကြတဲ့ သဘောပါ။
ဒါပေမဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ Drums နဲ့ Bass ကို အခြေခံအုတ်မြစ်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြပြီးတော့ တခြားတူရိယာတွေကို အလှဆင်တဲ့ နေရာ၊ ခေါင်မိုး စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အယူအဆတော်တော်လေး ကွဲပြားသွားပါတယ်။
ဥပမာ။ အိမ်တအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုပါစို့။ ဘယ်သူ့မှ အလှဆင်တဲ့ အရာ၊ ခေါင်မိုးကနေ ဘယ်တော့မှ မဆောက်ပါဘူး။
အုတ်မြစ်ချပါတယ် (Drums)။ ပြီးရင် တိုင်ထောင်ပါတယ် (Bass)။ ပြီးမှ ခေါင်မိုးတတ်တာ အလှဆင်တာ လုပ်ပါတယ် (Guitar/Keys)။
မြန်မာတီးဝိုင်းအများစုကတော့ ခေါင်မိုးအရင်တပ်၊ အလှဆင်တာ အရင်လုပ်ပြီးမှ တိုင်ထောင်၊ အုတ်မြစ်ချဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာတီးဝိုင်းတော်တော်များများမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။
Hillsong ရဲ့ လူသိများတဲ့ အဆိုတော်တွေကတော့ Dynamic (ဂီတအရှိန် အတက်အကျ) တွေအတွက် Drummers နဲ့ ပဲ စကားပြောတာများပါတယ်။
Ambience (နောက်ခံအသံ)၊ Lead Lines တွေ လိုချင်မှပဲ ဂီတာသမားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပါတယ်။
ဂီတာသမားအတော်များများဟာ ငါအရေးအကြီးဆုံးပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ခပ်ကျယ်ကျယ် တီးတတ်ကြပါတယ်။ Rock တို့ Metal တို့ မှာတော့ မှန်ကောင်းမှန်မယ်။
ဒါပေမဲ့ Pop အချို့လေးတွေ၊ Worship တွေမှာတော့ သိပ်ကျယ်ကျယ်မတီးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ Less is More နည်းနည်းက ပိုများတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိဖို့ လိုတယ်။
နောက်ပြီး Effects တွေကိုလည်း သူ့နေရာနဲ့ သူ သုံးတတ်ဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ Chorus တိုင်းမှာ Effect (အများအားဖြင့် Metal zone Distortion) နင်းနင်းပြီး တီးတာဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုများပါတယ်။
မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ဟိုတီးဒီတီး (အာလူးထည့်တာ) တွေကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့ကြပါတော့… မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ မတီးပဲ နေပါ။ ကြိုးညှိနေလိုက်ပါ။ Less is More ဆိုတာကို အမှတ်ရပါ။
Tag Burmese P&W Training Related posts
Burmese Service July 23,207 # Pastor Lam Niang
Zomi Service July 23,2017 # Pastor Tuan Suan Dal
Bible Study July 23,2017 # Pastor Pau Mung
English Service July 16,2017 # Pastor Van Te
Burmese Service July 16,2017 #Pastor Bu Kai
“UPNA”Zomi Service July 16,2017 # Pastor Pau Dal
Bible Study July 16,2017 #Pastor Pau Mung
English Service July 9,2017 # Khaipi
Burmese Service July 9,2017 # Pastor Mang Uap (Naunau)
Lampi Thum #Pastor Khen Mang
Bible Study July 9,2017 # Pastor Mang Uap (Naunau)
Zomi Service July 2,2017 # Pastor Mung Tawng
Bible Study July 02, 2017 # Pastor Naunau
Burmese Service June 25,2017 # Pastor Mang Uap (Nau Nau)
“Tate Nek Ding An” Pastor Zelpi # June 25,2017
Bible Study June 25,2017 # Pastor Mang Uap
Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Latest Videos	Burmese Service July 23,207 # Pastor Lam Niang
Lastest Posts	Zuapa Aw-Siamah Sian Niang
July 19, 2017	Tg.Thang Baan Kim leh Tg. Khup Muang, Te luanghawm tawh kisai Hungel na
June 25, 2017	Pastor Mung Tawng Pasian Nasepzawh Kum (40) Cin Lungdam Pih na Lai Te
June 20, 2017	“Hong Ki Ngen Lo Lei Ba” Nute ni 2017 # Pastor Vung Niang
May 14, 2017	MOTHER’S DAY – MAY 14, 2017 [ NUTE’ NI ]
May 13, 2017	Contact Us	Address
FGA Tulsa	Our story…	In the year 1982 the Lord gave Rev.Dr. Dam Suan Mungavision to reach the Nation of Burma (Myanmar) for Christ. It seems the Lord strongly urged him that one day the Nation of Burma (Myanmar) shall be known asaChristian Nation. In human’s point of view it is hard to believe. But the Lord said “Not by might nor by power but by My Spirit.” Red more >>>
Tags CloudBible Study Burmese Service English Service Feature Guest Speaker Pastor Mung Tawng Pastor Pau Mung Pastor Van Te Pastor Vung Niang Zomi ServiceStay Connected Facebook twitter Google Plus Youtube Vimeo RSS	Copyright © Full Gospel Assembly. All rights reserved. Developed by Hornbill Daily %d bloggers like this: